Zimbabwe: Mugabe oo laga yaabo Axadda berri ah in xilka laga wareejiyo – Kasmo Newspaper
Zimbabwe: Mugabe oo laga yaabo Axadda berri ah in xilka laga wareejiyo
Updated - November 18, 2017 6:39 pm GMT
London (kasmo), Robert Mugabe waxaa laga wareejin doonaa xilka Madaxweyne-nimada, malaha waabarigaba, sidaasna waxaa qoraya Wargayska Independent oo soo xiganaya ilowareedyo xisbiga talada haya ee ZANU-PF.
Golaha Dhexe ee Xisbiga ayaa barri subax isugu iman doona kulan gaar ah, si xilka looga wareejiyo hoggamiyaha 93 jirka ah iyo afadiisa Garce oo laga qaadi doono xilka Guddoonka Ururka Haweenka.
Wargayska wuxuu intaa ku darayaa in Emmerson Mnangagawa, Madaxweyne ku-xigeenkii bishii hore la eryay, dib loo caleema saari doono.
Wararkaan ayaa soo baxaya ka dib markii saaka dibadbaxyo gilgilay bartamaha Harare ka soo qaybgaleen tobannaan kun oo dadweyne ah, kuwaas oo taageero u muujinaya tillaabada Militarigu Madaweynaha ku galiyeen xabsi-guriga, isla markana dalbanaya xil ka-qaadistiisa.
Dibadbaxyada oo sidii hab dabbaldeg u socday waxaa ka soo qaybgalay Jamciyadda awoodda badan Xukuumaddana ku dhow ee Ruug-caddaagii dagaalkii xornimada iyo Mucaaradka isbeddel-doonka ah.
Mid ka mid ah boorarka dibadbaxayaasha oo lagu qoray “Codkii shacabka” waxaa ka muuqanayay sawirka Constantino Chiwenga, Taliyaha Ciidammada ee hoggaaminaya geeddisocodka kalaguurka, caawana waxaa Tvga qaranka laga sheegay in Madaxweynuhu berri subax kulan la qaadan doono Taliyaha oo qudhiisu ka mid ah ruug-caddaagii xorriyadda.
Militariga dalka ayaa waligood, xiriir adag oo ku dhisan mabaadii’da iyo bulshada, la lahaa Xisbiga ZANU-PF, laakiin “Foreign Policy” ayaa qaba in soo bixitaanka madax cusub oo ku dhow xaaska dhaxli karta Mugabe, ay u arkeen mid halis galinaysa danahooda.